IHuawei P40 Pro -i-Unboxing kunye novavanyo lokuqala | Iindaba zeGajethi
Siye sanamava yenye yezona zinto zibalaseleyo zikaHuawei embalini, kwaye kukuba umzuzu wokufuna ukwazi owahlala ngenxa yobhubhane wangoku usenze sanandipha umboniso ngeli xesha kumakhaya ethu. Ukuthetha kunye neqela laseHuawei kunye nabanye oogxa babo baphosakele. Nokuba kunganjani na, njengoko inkampani yaseAsia ingafuni ukuba uphoswe kwaphela yiyo yonke into abayivezileyo, bakwazile ukufumana iHuawei P40 Pro entsha ezandleni zethu kwimizuzu embalwa emva kokunikezelwa kwayo. Fumanisa kuthi ukungabikho kwebhokisi yeziphelo eziphezulu zeHuawei, iP40 Pro, nazo zonke izinto zayo kunye nento ekufuneka uyazi malunga neenoveli zayo.
Okokuqala sifuna ukukhankanya loo nto Senza olu hlaziyo kwakhona ngokusebenzisana kunye namaqabane e-Androidsis, Ke ngoko, siza kubona ukungabikho kwebhokisi kunye nokubonakala kokuqala apha kwiActualidad Gadget, kodwa kwiveki ezayo uya kuba nakho ukonwabela uphononongo olupheleleyo ngeemvavanyo zekhamera kunye nokusebenza kwi-Androidsis, zombini kwiwebhusayithi yayo nakwisiteshi sayo seYouTube. Ngaphandle kokuqhubeka kokuhamba, masihambe kunye neenkcukacha zale Huawei P40 Pro.
1 Iimpawu zobugcisa
2 Iikhamera: Indawo yokuTshintsha
3 Imultimedia kunye nezinye izinto ezinokubakho
4 Umahluko phakathi kweemodeli ezahlukeneyo
Njengoko ubona, le P40 Pro intsha ayinanto, kwinqanaba lobuchwephesha bamandla Iprosesa yayo yeKirin 990 evela kwinkampani yaseAsia uqobo ihamba ne-8GB ye-RAM kunye neyunithi yeMali G76 yokulungiswa kwemizobo.
Umzekelo P40 Pro
Isikrini 6.58 intshi OLED - 2640 x 1200 FullHD + kwi-90Hz
Ikhamera engasemva I-50MP i-RYYB + ye-Ultra Wide Angle 40MP + 8MP 5x Telephoto + 3D ToF
Ukugcina I-256 GB iyandiswa ngekhadi lokuthengisa
Umfundi weFingerprint Ewe-Kwiskrini
Ibhetri I-4.200 mAh ngerhafu ekhawulezileyo ye-40W i-USB-C-iReversible Qi charge 15W
Inkqubo yokusebenza I-Android 10-EMUI 10.1
Unxibelelwano nabanye I-WiFi 6 - BT 5.0 - 5G - NFC - GPS
U bunzima I-203 gram
Ixabiso 999 €
Ukusuka kwinqanaba lobugcisa Kuya kufuneka sigqamise inyani yokuba sinobuchwephesha bethungelwano nge-5G, Kwaye kule nkalo uHuawei nguvulindlela, enye yeefemu ezihambisa olu hlobo lonxibelelwano kwihlabathi liphela. Njengoko bekulindelwe, sinesizukulwane samva nje seWiFi 6, iBluetooth 5.0 kunye neNFC ukuze sikwazi ukwenza iintlawulo ngesixhobo okanye ukusivumelanisa.
Iikhamera: Indawo yokuTshintsha
Sinesimodyuli esineemvakalelo ezine esineempawu esenza umahluko kwinqanaba loyilo, oku kuphinda kufikelele kwincasa yomthengi. Ngokwam ndonwabile ngolungiselelo lwekhamera lwangaphambili olungafakwanga abenzi boluvo abambalwa, kodwa ndiyaqonda ukuba kunyanzelekile ukuvuselela amaxesha ngamaxesha kule nkalo ukuze kwahlulwe iimodeli ezintsha kwezindala "ezindala". Iziphumo zokuqala esizifumeneyo bezintle njengoko ubona kwiimvavanyo esizishiya zingezantsi ukuvula umlomo wakho kancinci.
Inzwa ye-50MP f / 1.9 ye-RYYB
I-40MP f / 1.8 i-Angle ebanzi
Ifowuni ye-8MP kunye ne-5x zoom
Ngendlela efanayo sinokurekhodwa kwevidiyo ngozinzo olubonakalayo kunye notshintsho olufanelekileyo phakathi kweekhamera, yiyo loo nto I-EMUI 10.1 yenza usetyenziso lwekhamera lube namava amnandi ashiye incasa emilonyeni yethu kwezi mvavanyo zokuqala Kwaye siqinisekile ukuba iya kusinika iziphumo ezilungileyo kakhulu kuvavanyo lokugqibela. Sifumana ukuqhubekeka kokungena kwimifanekiso, umahluko omncinci phakathi kwempu esiyithathayo kunye nesiphumo sokugqibela, kwaye asazi ngokupheleleyo ukuba kulungile okanye kubi, ngakumbi ngobuGcisa beArtificial.
Imultimedia kunye nezinye izinto ezinokubakho
Siqala ngescreen sayo esimangalisayo esiphantse sibe zi-intshi ze-6,6 OLED ngazo zonke iitekhnoloji ze-HDR ezinokuqikelelwa kwaye njengoko kuhlala kunjalo kwibrendi ibonelela ngolungelelwaniso lombala ngokugqibeleleyo. Singasifumana isisombululo I-FullHD + ngenqanaba lokuhlaziya lama-90Hz Kwaye yenye yezona zinto zindothusileyo, isikrini sihle kakhulu kwaye ukusetyenziswa kwevidiyo kufanelekile njengamava xa uthatha imifanekiso. Ngapha koko, ndingatsho ukuba isikrini yenye yezinto endizithandayo ngale Huawei P40 Pro.
Ibhetri yale Huawei P40 Pro yi-4.200 mAh kwaye ngokucacileyo asikabi nakho ukuvavanya, nangona iimvakalelo zilungile kunxibelelwano lokuqala. Unika intlawulo ekhawulezileyo ye40W kukhatshwa kukutshaja ngaphandle kwamacingo okubuyela umva ukuya kuthi ga kwi-27W, obu bubudenge bokwenyani, enyanisweni kuya kuba nzima ukufumana itshaja engenazingcingo ehambelana nokuQi ekhupha amandla amaninzi. Ewe kunjalo, nangona ibhetri ingekho nkulu ngokukodwa, iHuawei inamava aqinisekisiweyo xa kufikwa ekugcineni ubomi bayo.
Umahluko phakathi kweemodeli ezahlukeneyo
Umahluko ophambili ulele kwikhamera, nganye nganye iya kuba nesenzwa esinye, ukusuka kwi-3 kwi-P40 ukuya kwi-5 kwi-P40 Pro +. Kufuneka iqatshelwe ukuba iP40 Pro + iya kwakhiwa nge-ceramic kwaye iya kuba nemibala emibini kuphela, emhlophe namnyama, ekhethekileyo kunye nenyani yokuba ine-12GB ye-RAM eyi-4GB ngaphezulu kweemodeli zangaphambili okhankanyiweyo. Siza kukugcina unolwazi kwaye siza kukuzisa uphononongo kungekudala.
Into esingafanele ukusilela ukuyikhankanya yile sinethuba lokukhetha phakathi kwemibala emine: Ngwevu, Ukuphefumla okumhlophe, Mnyama kunye neGolide Ukongeza kugqityi-ceramic oluya kuba lolona hlobo luphezulu loluhlu, iHuawei P40 Pro + esinethemba lokuyivavanya kamva.
Njengoko besesitshilo, siyathemba ukuba ividiyo ekhokelela koku kungabikho kwebhokisi kunye nokubonakala kokuqala iya kukukholisa kwaye siyakukhumbuza ukuba kule veki izayo uzokwazi ukubona uphononongo olupheleleyo kwiveki ezayo kwisiteshi se-YouTube se-YouTube nakwiwebhusayithi yayo, www.androidsis.com apho kukho ii-totorales ezininzi kunye nokuphononongwa malunga neemveliso ze-Android ezikhoyo kwintengiso, uza kuyiphosa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IHuawei P40 Pro -I-Unboxing kunye novavanyo lokuqala
Ukongeza kwi-P40, uHuawei ukwazisile ngeWatch GT 2e, umncedisi kaCelia, iVidiyo kaHuawei nokunye.